ထပ်ခါတလဲလဲ audiovisual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ stimulation မှ erectile တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ (1998) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
ထပ်ခါတလဲလဲအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ (1998) မှ erectile တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ
EUR Urol ။ 1998;33(3):290-2.
Kim က SC1, ဘန် JH, ဟွန် JS, seo KK.
1Urology, ဆေးပညာကောလိပ်ဌာန, Chung-Ang University က, ဆိုးလ်, ကိုရီးယား။
psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်သာမန်ယောက်ျားနှင့်အတူလူနာအတွက်အကြိမ်ကြိမ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့ erectile တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုများဆုံးဖြတ်ရန်။
အလားတူခေါ်ဆောင်သွားသည်ဗီဒီယို 45 ရက်ဆက်တိုက် 20 ယောက်ျား (psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့် 25 သာမန်ယောက်ျားနှင့်အတူ3လူနာ) ကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ဆွနေစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏ erectile တုံ့ပြန်မှု (ယူအက်စ်အေ။ Dacomed, Minneapolis, အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ) RigiScan သုံးပြီးစောင့်ကြည့်ခြင်း, စိုက်ထူ၏လုပျသငျမာကျောမှု,5မိထက်ပိုပြီးအဘို့အထောကျ, တိုင်းတာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းပထမ, ဒုတိယနှင့်တတိယရက်အဆိုပါတင်းကျပ်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ တူညီဖို့ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်ယခင်ထိတွေ့မှု၏ယခင်မျိုးစုံကြည့်ရှုတဲ့ရှိမရှိသို့မဟုတ်အလားတူရုပ်ရှင် erectile တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းခြင်းနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများ (p <0.05) ရှိသည့်လူနာနှစ် ဦး စလုံး၏ပထမနေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်တတိယမြောက်နေ့၌သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်။ ပထမနေ့၌မာကျောမှုသည်မြင်ကွင်းမျိုးစုံရှိသောအုပ်စုတွင်ကြည့်ရှုမှုနည်းသော (အုပ်စု <<0.05) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာနိမ့်သည်။
လူနာအကြိမ်ကြိမ်ဆွထိတွေ့သည့်အခါအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်း penile စိုက်ထူ၏ real-time စောင့်ကြည့်မှုမမှန်သော-အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။